10 Ebe kacha aga ebe ubi tenis | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ebe kacha aga ebe ubi tenis
(Emelitere ikpeazụ On: 02/10/2021)
N'elu ụlọ n'okporo ámá ndị a ma ama na Paris, ma ọ bụ n'etiti ugwu ugwu Scottish ma ọ bụ Alps, ndị a bụ ebe ezumike kachasị amasị na Europe. Ọzọkwa, ndị a 10 ebe kacha elu na mpaghara tenis ga -enye gị ume site na ikuku mbụ wee bulie egwuregwu gị n'ọkwa ọhụrụ. solo ma ọ bụ di na nwunye, ị ga -ahụ ebe ndị a dị egwu n'anya na ogige tenis ha.
1. Ebe kacha mma na France nwere nnukwu ebe egwuregwu tenis: Mouratoglou Tennis Academy
Riviera French bụ otu n'ime ebe ezumike kacha elu na France, hapụ Europe. Echiche ugwu ugwu Alpine, ọdọ mmiri na -acha anụnụ anụnụ, na aja aja, dị nrịgo ole na ole site na mpaghara tenis Mouratoglou. N'ileghachi anya n'oké osimiri Ionian, Ogige tenis ọgbara ọhụrụ a bụ ọmarịcha ebe gị na ụfọdụ ndị nkuzi tennis kacha elu na Europe na-eme aka azụ gị..
Mahadum tennis Mouratoglou na -anabata ụdị ndị egwuregwu niile na ọkwa niile. Ogige tennis Mouratoglou na -emeghe kwa ụbọchị. N'oge ọnụnọ gị na họtel & eme, ị nwere ike ịchekwa ụlọ ikpe maka otu elekere kwa ụbọchị. Ogige tennis Mouratoglou dị ịtụnanya bụ akụkụ nke ama ama n'ụwa Mahadum Mouratoglou ma nwee ụfọdụ ndị egwuregwu tennis kacha mma n'ụwa na -eme ebe a ma na -aga n'ihu spa ma ọ bụ osimiri ụlọ nkwari akụ maka izu ike na izu ike..
2. Ọbịbịa ezumike dị ịtụnanya na Courtlọikpe Tenis: Ọ bụ San Pietro Di Positano
Nnukwu ogige tennis a bụ naanị maka ndị ọbịa ụlọ oriri na ọ Sanụ Ilụ Il San Pietro. Ogige tenis Positano 5 na-enye Oké Osimiri Mediterenian na ọmarịcha Oké Osimiri Amalfi. Ogige tenis San Pietro dị na Positano, otu n'ime 10 ọmarịcha ebe ị ga -eleta n'ụsọ osimiri Amalfi, na Italy n'ezie.
Ịga Amalfi bụ nrọ onye ọ bụla. Osimiri, na obodo mara mma, ndu oke osimiri, na echiche akwụkwọ ozi toro na nnukwu ogige dị n'èzí maka egwuregwu na tenis, onye ọ bụla nwere ike ịrịọ maka ihe ọzọ? Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị n'ịme egwuregwu gị, ị nwere ike gbadaa n'ụsọ osimiri ahụ gbara agba, ma ọ bụ gaa naanị ụgbọ mmiri siri yana Positano dị egwu.
3. TỌ bụ mpaghara tenis kacha mma na England: Isi ala, Cornwall
Nkume nkume, aja aja, acha anụnụ anụnụ Atlantic Ocean, na obere ụlọ Bekee na moorland green, Cornwall bụ otu n'ime ebe ezumike ezumike mara mma na England. Peninsula dị ịtụnanya zuru oke maka izu ike n'ụsọ osimiri, na ukwu ihe omume mpụga, dị ka egwuregwu tennis ma ọ bụ egwuregwu mmiri.
Ọ dị na Cornwall, ị nwere ike ịhọrọ site na 4 ogige tenis iji kpọọ nnukwu egwuregwu. Ọmụmaatụ, Penzance Tenis klọb mepere emepe maka ndị ọbịa niile na ndị egwuregwu na ọkwa niile. Otú ọ dị, ụlọ ikpe tennis kacha mma dị na Headland Hotel na Newquay. Na -ele anya Fistral Beach na Oke Osimiri Atlantic, Headland bụ ụlọ nkwari akụ okomoko, nwere nnukwu ihe eji eme ihe n'èzí iji nọrọ na -arụsi ọrụ ike n'oge ezumike gị n'oké osimiri Bekee dị ịtụnanya.
4. Ebe ezumike tenis kacha elu na Switzerland: Gstaad Obí
Ọtụtụ ndị njem nwere ike mara obodo Gstaad dị ka ihe ịtụnanya oyi, mana ọ bụkwa akụkọ ifo n'oge ọkọchị. The Swiss Alps dị egwu n'oge opupu ihe ubi, na ọnọdụ ihu igwe dị mma maka ịgagharị, ịgba ígwè, na egwuregwu tenis. Gstaad bụ ebe dị ịtụnanya maka ezumike na -arụ ọrụ na Switzerland, nwere echiche na -akpali akpali na ikuku alpine ọhụrụ na okike nke ga -eme ka ike gị dị elu.
Dị ka e kwuru n'elu, Gstaad bụ ebe kacha elu maka ezumike tenis na Alps Switzerland. Site na ụlọ ikpe tennis nke kpakpando 5 na ụlọ oriri na nkwari akụ Gstaad Palace ruo Swiss Open J. Mpaghara egwuregwu tennis dị na Safra Sarasin, na ebe egwuregwu klọb Gstaad, nhọrọ dịịrị gị, echiche Alpine ga -echere n'ụlọ ikpe ọ bụla iji soro ụfọdụ ndị egwuregwu tennis kacha mma mee mmegharị gị.
5. Gwuo Tenis n'ime Ọdọ Geneva, Switzerland
Dị jụụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na acha anụnụ anụnụ, ịma mma eke mara mma, Lake Geneva bụ ebe ezumike anwansi. Ọdịdị Alpine dị n'azụ na-adọta ndị ọbịa n'afọ niile, gaa na ngwụcha ngwụcha sọọsọ, ma ọ bụ ezumike mmiri ezumike. Ebe a, ị nwere ike họrọ site n'ịgagharị n'oké ọhịa Alpine ma ọ bụ izu ike n'akụkụ ọdọ mmiri, site n'ịnọgide na -arụsi ọrụ ike ma ọ bụ jụọ oyi, nke ọ bụla, ịhọrọ ga -eme ka ahụ gbasie gị ike ma nwee ume.
Ebe ọ bụ na Ọdọ Mmiri Geneva bụ ebe dị mma maka ntụrụndụ n'èzí, ogige tenis ebe a na -agbakwụnye ọmarịcha ma na -adọta ndị egwuregwu tennis si n'akụkụ ụwa niile. Ụlọ oriri na ọ andụ hereụ na ebe ntụrụndụ ebe a na -enye ogige tenis dị ịtụnanya, na weekeders nwekwara ike ịnụ ụtọ otu ma ọ bụ di na nwunye’ egwuregwu n'otu n'ime klọb tennis na Lake Geneva. Nkume Switzerland a na -anabata ndị egwuregwu na ọkwa niile yana maka mmefu ego ọ bụla.
6. Ebe kacha aga ebe ubi tenis: Ememe Tennis na Paris
Ị maghị na isi obodo na-atọ ụtọ na nke ihunanya nke ụwa nwere ụlọ egwuregwu tennis kacha mma na Europe. Otu n'ime ntụpọ ndị a zoro ezo na ngalaba iri na abụọ, Paris’ ụlọ egwuregwu tennis. Ebe klọb ahụ zoro n'okporo ụzọ Paris ochie, ụlọ ikpe tennis nke oge a gbanwere ka ọ bụrụ nnukwu ogige tenis site n'ụlọ anụ ụlọ. Ọ bụrụ na ọ na -esiri gị ike ikwere bịa hụ onwe gị, n'ihi na klọb tennis a ghe oghe maka mmadụ niile.
Ebe ọ bụ na onye ọ bụla na -arọ nrọ ịbịa Paris, ọtụtụ na-emezukwa ogologo ndụ ha nke ịga njem na Paris ma ọ bụ ịkwaga na-adịgide adịgide, obodo juru n'ọnụ. Yabụ na ọ bụghị ihe ijuanya na ụfọdụ ụlọ ọrụ ama ama na Paris na -agbago n'elu ụlọ. Nke a bụkwa ikpe ụlọ ikpe tennis, ebe n'ọtụtụ mba ndị a bụ ubi dị n'èzí, na Paris, ị nwere ike na -eme mmegharị gị n'ihu n'elu ọdụ ụgbọ oloko, na Ogige Atlantic, na nlegharị anya Montparnasse.
7. Gwuo Tenis In Pikes Hotel Ibiza
Agwaetiti Spanish bụ ama ama maka nnọkọ oriri na ọ fabụ, okomoko hotels, na osimiri. Ọ ga -eju gị anya ịmata na Ibiza nwere ụfọdụ echiche kacha akpali akpali na Spain. Agwaetiti dị okwute, osimiri ọlaedo, na oke osimiri na -emepụta ihe onyonyo nke na -eme ka mmadụ niile chefuo maka ịgba egwu abalị niile. Kama, ha na -awa anyanwụ, ịnabata nnukwu ụbọchị ọzọ na Ibiza.
Ọzọkwa, nnukwu agwaetiti nke agwaetiti Spanish na -eme ka agwaetiti ahụ bụrụ ebe zuru oke maka ezumike na -arụ ọrụ. Hotels na -enye nnukwu ụlọ egwuregwu, dị ka ogige tenis dị egwu. Otu ebe kacha mma maka egwuregwu tenis solo bụ ogige pink nke Pikes Hotel. Ogige tennis a na -atọ ụtọ na -ele anya n'oké osimiri nke nwere ugwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara ya gburugburu na mbara igwe na -acha anụnụ anụnụ n'elu. Zuru oke maka ndị na -alụbeghị di, ma ọ bụ okpukpu abụọ, ọ bụrụ na ị bụ onye na -akwado tenis, mgbe ahụ Pikes na Ibiza bụ ihe kwesịrị.
8. Agwaetiti Tenuta Delle Ripalte Elba, Tuscany
Ụlọ ezumike ole na ole n'agwaetiti Elba enweghị ogige tenis. Agwaetiti Elba dị na Tuscany dị n'akụkụ oke osimiri, pụọ n'okporo ụzọ ubi -vine na Villas ndị Itali, ma dị ka nrọ. Agwaetiti Elba bụ otu n'ime ebe ndị na -eme mkpọtụ na Europe, ị ga -ekwenye ozugbo ị banyere n'okpuru na ọbụna tupu, mgbe m na -enwe mmasị n'agwaetiti kacha ibu na Italy.
Ya mere, Agwaetiti Elba bụ ọmarịcha ebe ezumike na -apụ apụ. Na -agbakwụnye n'ụsọ osimiri, ị nwere ike igwu egwu solo ma ọ bụ tụọ uru di na nwunye ike gị n'otu n'ime ebe ntụrụndụ kacha elu’ ogige tenis. Dị ka e kwuru n'elu, ụlọ ezumike ọ bụla na Elba na -enye ụlọ ikpe tennis nkeonwe, ọdọ mmiri, ma ọ bụ osimiri nkeonwe. Mgbe ị nwere ike isi n'ụlọikpe wụpụ n'oké osimiri n'otu nzọụkwụ, ị na -ebi ezigbo ndụ, n'ezie.
9. Ebe kacha aga ebe ubi tenis: Ezumike Tenis na Scotland
Leslọ, obere ụlọ, Ọdịdị Scottish nke ọnụ ọnụ ugwu na ugwu, Ịga Scotland na -alaghachi n'oge ndị knights na akụkọ mgbe ochie. Ọ bụ ezie na ụlọ akịrịka na nnukwu ụlọ anaghị emetụta oge n'ime, nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na -anabata ndị njem taa. Site na ọdọ mmiri ebe egwuregwu tenis, Emebere nkọwa niile iji nye ndị ọbịa ihe niile ha chọrọ n'ụlọ.
Ya mere, ọ bụrụ na -amasị gị igwu egwuregwu tennis, ma ọ bụ na -agbago na echiche ime obodo mara mma, Scotland bụ obodo mara mma. Okwu agaghị enye ahụmịhe ezumike na Scotland nke ọma ruo mgbe ị ga -ahụ onwe gị ịma mma. Mgbe ị nọ n'ebube okike dị otú ahụ, ị ga -eji nkeji oge ọ bụla nke ntụrụndụ na izu ike dị n'èzí kpọrọ ihe.
10. Oge ezumike Tenis Ndidi Salzkammergut Austria
Ị nwere ike na -ede abụ n'ọdọ mmiri, na -ekiri ọdịda anyanwụ, ya na Strudel. N'akụkụ aka nke ọzọ, ị nwere ike buru ụgbọ elu ugwu Schafberg gaa n'Ọdọ Mmiri Wolfgang dị ebube na Salzburg. Mpaghara ọdọ mmiri Salzburg mara mma nke ukwuu yana ebe ezumike dị mma na okike. Echiche ọdọ mmiri, Ala ịta ahịhịa Alpine, njem mkpagharị njem n'etiti St Gilgen na St Wolfgang bụ ụzọ dị egwu iji mee ka ike gị dị ọhụrụ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ọbịa na -abịa n'Ọdọ Mmiri Wolfgang iji zuru ike, ọ bụ n'ezie ebe ezumike na -akpali akpali. Ewezuga oke mkpagharị, ị nwere ike, mpaghara Ọstrịa dị ịtụnanya maka ndị hụrụ tenis n'anya. Ụlọ oriri na ọ inụ Salụ ndị dị na Salzkammergut nwere ogige tenis mara mma nke nwere echiche alpine na ọdọ mmiri. Ya mere, ma ọ bụrụ na nrọ ogologo ndụ gị bụ ezumike tenis na Austria, Salzkammergut bụ ebe kacha mma.
ebe a na Save A Train, anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi nnukwu ọrụ ezumike. ndị a 10 Ebe kachasị elu nwere nnukwu echiche na ubi tenis dị ịtụnanya. Ya mere, ị nwere ike ịme egwuregwu solo gị ma ọ bụ na egwuregwu megide ndị enyi gị, ịmepụta ncheta na -atọ ụtọ na ezumike gị mara mma.
Ịchọrọ ịdebanye na blọọgụ anyị "Ebe iri nwere ebe egwuregwu tenis" na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fen%2Ftop-destinations-tennis-fields%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)